Muxuu Cabdikariin Xuseen Guuleed ka yiri 18-ka May? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Cabdikariin Xuseen Guuleed ka yiri 18-ka May?
Muxuu Cabdikariin Xuseen Guuleed ka yiri 18-ka May?
Muqdisho (Caasimada Online) – Musharrax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo war qoraal ah soo saaray ayaa ka hadlay xuska 18-ka May oo ah markii ay Somaliland ku dhowaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale muddo hadda laga joono 30 sano.
Guuleed ayaa marka hore boggaadiyey guulaha ay Somaliland ka gaartay dhinacyada nabadda, horumarka iyo hannaanka Doorashooyinka ku dhisan qof iyo codka.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in qadiyadda Somaliland ay u baahan tahay in la siiyo ahmiyad gaar ah, iyada oo mudnaanta la siinayo aragti Fog oo ay ku dheehan tahay Tanaasul.
Madaxweynihii hore ee Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyey madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) uu ka gaabiyey arrimaha Somaliland, gaar ahaan wada-hadalladii socday ee u dhexeeyey labada dhinac.
“Waxaa wax laga xumaado ah in Maamulka Farmaajo aanu Arintaas siinin Mudnaantii iyo Meeqaamkii ay lahayd, taas badalkeeda uu kula kacay cunaqabatayn dhinaca Maawimooyinka Arrimaha Bulshada, mashaariicda horumarineed iyo waxyaabaha Aas-aasiga ah ee Dadka Reer Somaliland baahida u qabaan,” ayuu yiri musharrax Guuleed.